E Series Factory - China E Series mpanamboatra, mpamatsy
Metal Manual Heavy Duty Vertical Milling Machine Fitaovana ao an-trano 1750kgs
Hafainganam-pandeha totalin'ny spindle: 66-4530rpm Miasa: Lisitry ny latabatra: 1270 * 254mm Travel (X / Y / Z): 900 * 370 * 360mm Spindle Power: 5HP karazana fanodinana: milina fanodinam-pianakaviana Metal Manual Turret Milling Machine 66-4530rpm Ho an'ny fitaovana ao an-trano 5EBProduct Details1. Squareguideway amin'ny axis Y sy Z dia asongadin'ny fihenjana sy filaminana tsara.2. X axis dia fomba dovetail.3. Ny fananganana dia manamafy ny riona amin'ny lafiny roa amin'ny tsanganana, izay mahatonga ny masinina henjana sy tsara tarehy .4. Ny milina dia avo lenta amin'ny c ...
1370mm latabatra Turret fikosoham-bary milina, mandeha ho azy bobongolo Processing mitsangana Turret Mill
Travel Of Spindle Quill: hafainganam-pandeha 127mm: 80-5440 / (16grades) / 60HZ Haben'ny latabatra: 1370 * 305 * 85mm fitsangatsanganana (X / Y / Z): 720 * 415 * Herin-tsolika 385mm: karazana fanodinana 5HP: bobongolo ilaina isan'andro. Famolavolana milina fanodinana latabatra 5HP 1370mm ho an'ny zavatra ilaina isan'andro Famolavolana bobongolo 6Prod Details: 1. Squareguideway amin'ny axis Y sy Z dia asongadin'ny fihenjana sy filaminana tsara.2. Ny velaran'ny toeram-piasana sy ny làlan'ny torolàlana 3 dia mihamafy sy miorina tsara.3. Nohamafisina ny fanamafisana ny taolan-tehezana amin'ny lafiny roa ...
4E Knee Type Gear Head Milling Machine 1500 * 1700 * 2150mm Dimension 1400kg Weight Net
Dimension: 1500 * 1700 * 2150mm Fandefasana ampela: 0.005mm Max.disty avy amin'ny spindle sy ny latabatra: 410mm hafainganam-pandeha: 80-5440rpm lanja Net: 1400kg anarany: milina fanodinana Turret 4E Knee Type Gear Head Milling Machine 1500 * 1700 * 2150mm refy 1400kg Lanjany Net 1. Vidiny ambany misy kalitao tsara.2. Fandeferana amin'ny spindle: 0.005mm.3. Ny lohan'ny fikosoham-bary dia mandray maotera 3HP, lohan'ny pulley haingam-pandeha 16, loha hafainganam-pandeha miovaova tsy voatery. 4. Nivory tany Sina ny ampahany Taiwan .5. Ny lalan'ny torolàlana Treble swallowtail dia mandray ...
1270 * 254mm Benchtop Mill Drill Machine R8 Spindle Taper ho an'ny fitaovana ao an-trano
Takelaky ny latabatra: 1270 * 254 * 90mm X / Y / Z dia lavitra: 900/370 / 360mm Max Distance eo anelanelan'ny Spindle mankany amin'ny latabatra: 400mm fitsangatsanganana Quill: 127mm hafainganam-pandeha fihodinana: 80-5440rpm (16 Degre) / 60HZ Spindle Taper: R8 (NT30) Motor manify: 3HP Hosotra mandroso sy miverina miverina: ± 45 ° Zoro mihodina sy havanana: ± 90 ° refy: 1500 * 1700 * 2150mm lanja mavesatra: 1500kgs X axis deovetail way Y / Z axis square way 1270 * 254mm latabatra faritra Taiwan dingana hafainganam-pandeha economiclal milina fanodinana 4EB 1. Low vid with go ...
0.005 Spindle Tolerance Vertical Turret Milling Machine Ho an'ny fikarakarana bobongolo ilaina isan'andro
Toetra: TOSIKARATRA vaovao: Herin'ny takian'ny mpanjifa: 5HP Loko: Fandeferana amin'ny spindle vita amin'ny Custom: 0.005 X / Y / Z Travel: 1000/385 / 340mm Spindle Taper: NT40 Haingam-pandeha: 80-5440 / (16 Grades) 60HZ Haben'ny latabatra: 1370 * 280 * 90mm Warranty: 1 taona Diemension: 1600 * 1750 * 2200mm Lanja Net: 1750kg milina fanodinam-bidy ambany volo 5EA NT40 boribory faritra Taiwan milling head 1370 * 280mm fikarakarana bobongolo latabatra miasa 1. Vidiny ambany misy kalitao tsara 2. faritra Taiwan nivory tany Sina 3. Spindle tol ...
ISO30 / R8 Spindle Turret Milling Machine Miaraka amin'ny Tolerance 0.005mm mandeha ho azy
Rated Power: 2.2kw Spindle Tolerance: 0.005mm Max.disty avy amin'ny spindle sy latabatra: 400mm hafainganam-pandeha: 80-5440rpm Spindle: R8 / ISO30 anarana: Machine Turret Milling ISO30 / R8 Spindle Turret Milling Machine 3E 2.2kw Spindle naoty 0.005mm Fandeferana Spindle ny serivisinay: 1.Samin'ity vanim-potoana fiantohana ity, raha misy ny tsy mety amin'ny milina fanodinana turret, tompon'andraikitra izahay amin'ny fanomezana tetikasa hamahana ity olana ity haingana indrindra, ary manampy ny mpanjifa hamerina ny vokatra ...
Masinina mihodina avo lenta indostrialy 2.2KW Miasa maharitra amin'ny fiainana 1370 * 280mm
Hery naoty: 2.2KW Fandefasana ampela: 0.005mm Max.disty avy amin'ny spindle sy ny latabatra: 460mm Spindle: R8 / NT30 anarana: Turret Milling Machine Spindle hafainganam-pandeha: 80-5440 (16 Grand) / 60HZ 1370 * 280mm 3HP / R8 Taiwan Parts dingana Speed ​​Spindle Turret Milling MachineFampahalalana momba ny vokatra1. Ny milina fanaovantsika turret manerantany dia be mpampiasa amin'ny fitaovana ao an-trano, fanodinana bobongolo ilaina isan'andro, mankaleo saika amin'ny firenena rehetra erak'izao tontolo izao noho ny kalitao avo lenta amin'ny vidin'ny fifaninanana.2. Avo ...
3HP / R8 (NT30) Taiwan ampahany hafainganam-pandeha dingana Vertical Turret Milling Machine, latabatra 1270 * 254mm
Hafainganam-pandeha totalin'ny spindle: 80-5440rpm Model: 4E haben'ny latabatra: 1270 * 254mm fitsangatsanganana (X / Y / Z): 900 * 395 * 340mm herin-tsilo: 3HP Fandeferana ampela: 0.005mm 3HP Taona Taiwan Vertical Turret Milling Machine 900 * 395 * 340mm fitsangatsanganana 4E Product Details1. Ny làlan'ny torolàlana Dovetail dia raisina amin'ny axis X sy Z, ary ny axis Y way.2. Nivory tany Sina ny ampahany Taiwan .3. Ny fananganana dia manamafy ny riona amin'ny lafiny roa amin'ny tsanganana, izay mahatonga ny masinina henjana sy tsara tarehy .4. Mety amin'ny bobongolo ilaina isan'andro ...
1270 * 254mm Masinina fanamafisam-peo mahery miorina amin'ny alàlan'ny Dovetail Way XZ Axis
Hafainganam-pandeha Spindle: 80-5440rpm X sy Z Axis: Dovetail Way latabatra: 1270 * 254 * 90mm Max.distence entre spindle et table: 400mm spindle power: 3HP anarana: milina fanodinana Turret 1270 * 254mm latabatra boribory milina fanodinana latabatra 4E X Ary Z Axis Dovetail WayP Details momba ny vokatra1. Ny milina fanaovantsika turret manerantany dia be mpampiasa amin'ny fitaovana ao an-trano, fanodinana bobongolo ilaina isan'andro, mankaleo saika amin'ny firenena rehetra erak'izao tontolo izao noho ny kalitao avo lenta miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana.2 ....